Sina Lehibe vaovaon'ny kamiaona vaovaon'ny fiara vaventy? Florescence
Snow tubing dia vahaolana tsara, tonga lafatra ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy ho an'ny slide kely. Manalefaka ny fikapohana amin'ny bontsibontsina ny tubing ary manome loharano mahatsikaiky rehefa midina. Ranomasin'ny fifaliana sy fahafinaretana ity!
Size 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm
Fitaovana fanaronana Fonon-damba miaraka amin'ny ambany PVC; fonony lamba amin'ny faran'izay mafy ao ambany
Fitaovana fantsona anatiny Butyl
Color Toy ny fangatahanao
Fampiasana Ankizy, olon-dehibe ary lehilahy matavy
Package Kitapo misy kitapo sy baoritra
Details Antsipirian'ny vokatra sy tombony:
Ny fantsom-panala ataontsika dia natao ho an'ny fahafinaretana mandavantaona, na amin'ny fidinana amin'ny havoana na amin'ny hitsingevana eny ambonin'ny rano. Ny fantsom-bozaka matevina dia tena ahazoana aina na miala sasatra eo ambonin'ny rano ianao na manidina amin'ny havoana rakotra lanezy. Ny sisa ataonao dia ny manala ilay fantsona ao anaty boaty, mampidina azy amin'ny rivotra ary avelao hanomboka ny fahafinaretana.
Ny tampon'ny lamba fantsom-panala dia vita amin'ny polyester denier mavesatra 600 na manatsara nylon 1000 denier, ary ity fitaovana ity dia manala rano, mahatohitra holatra ary voaaro UV
Ny tahony fanohanana sy ny tadiny dia vita avy amin'ny tranokala polyester mavesatra mavesatra miaraka amin'ny tanjaka avo lenta izay matanjaka sy azo antoka.
Rehefa manidina eny amin'ny havoana ianao dia mila zavatra tazomina. Miaraka amin'ny fihazonana tànana mahery vaika izay lava ampy na dia ny mikitroka matevina indrindra aza dia hahatsapa ho voaro ianao rehefa mihazakazaka mahita hoe iza no mety hahazo ny lavitra indrindra.
Faran'ny ambany: ny fantsakan'ny oram-panala dia haharitra taona maro miaraka amin'ny fantsony matevina sy fantsom-bozaka azo avy any an-tany hafa.
PVC ambany: malaza indrindra any Rosia.
Azo ampiasaina amin'ny ski sy mitsingevana izy io
Fantsona mavesatra ho an'ny oram-panala, miala amin'ny fividianana fantsom-panala vaovao satria mandrovitra na mahazo lavaka izy ireo, tsy mitovy amin'ny fingotra voajanahary, fantsom-bozaka nefa tsy misy fofona mahery, tsy mampidi-doza amin'ny fahasalamana izany.
Loko isan-karazany no safidinao, ary azonay atao pirinty eo amin'ny fonony ny sary famantarana anao
Ny vokatra dia nandalo Sinoa "CCC", Amerikanina "DOT", Eoropeana "EN71" ary "PAHS", Mandritra izany fotoana izany dia nandalo ny mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana kalitao "ISO9001", ny mari-pahaizana momba ny fitantanana tontolo iainana "ISO14001"
1.Q: orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
A: Izahay dia orinasa matihanina manana traikefa 20 taona mahery amin'ny fanondranana sy fanamboarana.
2.Q: Misy ve ny OEM?
A: Eny, misy OEM, azonay atao araka ny marika, fonosana, lanja sns.
3.Q: Inona ny ora fanaterana?
A: ao anatin'ny 15-30 andro aorian'ny nahazoana vola 30%.
4.Q: Inona no hatao amin'ireo entana tapaka? Ianao ve dia hanonitra ireo entana amin'ny deffective namboarina?
A: Manana fomba fifehezana kalitao voafaritra tanteraka izahay .Raha mahita olana kalitao ianao (afa-tsy ny ratra amin'ny zavamaneno maranitra, ny fanimban'ny asidra sy ny alkaly ary ny fiparitahan'ny UV maharitra ela), azafady mba makà sary ary alefaso aminay, ary hijerena ny injenieranay. Raha izany dia ny olan'ny fakantsary, hanao tambiny mifanaraka amin'izany izahay.
5.Q: noraisina tsara ny santionany, naneho valiny tsara ny fitsapana, ahoana no hiantohana ny baiko rehetra mitovy kalitao?
A: Aza manahy. Ny haben'ny baiko dia mitovy amin'ny santionany. Satria ny santionany dia nalaina tamin'ny famokarana betsaka.
Shary eto, te-hanorina fifandraisana maharitra miaraka aminao aho. Tongasoa eto tonga hiaraka aminay, ny fanontanianao rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 12 ora.
QINGDAO FLORESCENCE, NY MPIARAKA TSARA ANAO !!!
Fifandraisana: Shary Li
Previous: Tube 15nch an'ny fiara misy fiara 15 / 185R15
Manaraka: Fantsom-panala saro-takelaka ambany matevina miaraka amin'ny fonony misy nylon
Inner Tube ho an'ny Snow blower Tyre
Ny kodiarana sy ny fantsom-panala
Snow Tube Amin'ny Cover Pvc
700x25C Butyl fingotra bisikileta kodiarana anaty Tube F ...
Fantsona anaty kodiarana traktera 16.9-30